Ungabongeza njani abantu kwiTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungabongeza njani abantu kwiTelegram?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 344
Ngokungafaniyo nezinye ii -apps zemiyalezo ekhawulezileyo, Yocingo wenza ungqamaniso oluzenzekelayo bonke abafowunelwa bethu. Oku kuthetha ukuba abo bantu sinabo kwiselfowuni kwaye sikhuphele isicelo siza kuvela kuluhlu lwabafowunelwa ngokuzenzekelayo.
Nangona kunjalo Sinenketho yokongeza abantu abatsha kuluhlu lwabahlobo bethu ngaphakathi kwesi sicelo sinomdla. Ukuba awazi ukuba ungayenza njani, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo apho sikuxelela yonke into ngokukhawuleza nangokulula.
Khangela umnxibelelwano kwiTelegram
Ukuba ufuna ukufunda ukuba ungongeza njani abantu kwiTelegram Into yokuqala omele uyazi yindlela yokukhangela abafowunelwa ngaphakathi kwesicelo. Inyani yile yokuba kulula kakhulu ukuyenza:
Cinezela kwi ipensile icon ebonakala emazantsi esikrini.
Cofa kwi icon yeglass ukuqala uphendlo lwabafowunelwa
Kwibala lokukhangela Kuya kufuneka ubonise igama lomsebenzisi okanye alias lomntu ofuna ukumfaka kuluhlu lwabahlobo bakho.
Cofa kwigama lomsebenzisi zomntu ofuna ukongeza
Ilungile. Ukukhangela kuphelile kwaye ngoku ungathumela umyalezo kuloo mntu.
Ungabongeza njani abantu kwiTelegram
Sele siyazi eyona ndlela ikhawulezayo yokukhangela abafowunelwa kwiTelegram, ngoku kulungile Ndizongeza njani kuluhlu lwabahlobo bam? Nika ingqalelo ezi ngcebiso zilandelayo sikuzisele zona. Kulula kakhulu ukongeza abantu kwiakhawunti yethu:
Izinto zokuqala eziza kuqala: Vula usetyenziso kwisixhobo apho ukhuphele iTelegram
cofa kwimigca emithathu ethe tyaba ebonakala kwinxalenye ephezulu yasekhohlo kwesikrini ukufikelela kwimenyu ephambili
Ngoku kufuneka ucofe ukhetho "Ifowuni"
Ngokucofa ukhetho "abafowunelwa", Isicelo siza kubonisa izixhobo ezininzi esinokufikelela ngokulula kuzo:
ukufumana abantu abasondeleyo
lista kubo bonke abafowunelwa
I-Telegram ifaka inketho "yokumema abahlobo". Apha siya kuba nethuba lokumema abo bantu bangekasifumani isicelo. Kufuneka nje sikhethe egameni lomntu esifuna ukummema kwaye ucofe kwiqhosha "MEMA ITHELELI"
Khangela abantu abakufutshane
Unayo ifayile ye- ukhetho lokubhalela abantu abakufutshane nendawo ekuyo. Ngokucofa ku "Fumana abantu abakufutshane" usetyenziso luzakubonisa uluhlu lwabo bonke abafowunelwa abasondeleyo kuwe. Khetha umsebenzisi ofuna ukumbhalela kwaye yiyo loo nto.
Cofa ku "Yongeza"
Ukuba unenombolo yomntu ofuna ukongeza kuluhlu lwabahlobo bakho ke olona khetho luza kuba kukucofa iqhosha u "yongeza" elibonakala ngasekunene ezantsi kwesikrini.
Emva kokucofa apho iwindow entsha iya kuvela apho Kufuneka ubonise igama lomntu ukuba uza kongeza kuluhlu lwakho loqhakamshelwano (olunyanzelekileyo) kunye nefani (ukhetho). Apha ngezantsi uyakubeka inombolo yomntu kwaye yiyo loo nto.
1 Khangela umnxibelelwano kwiTelegram
2 Ungabongeza njani abantu kwiTelegram
3 Mema abahlobo
4 Khangela abantu abakufutshane
5 Cofa ku "Yongeza"
Ndizibukela njani iziqwengana zeTwitch?